ရွှေကျင် (Shwe Gyin) | Moep1's Blog
(နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၆ ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်)
အမှတ် (၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းသည် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက် ဇူလိုင် ၅ရက် နံနက်ပိုင်းက ပဲခူးတိုင်း ရွှေကျင်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် (၆) မိုင်ခန့် အကွာ ကျောကန်ဂါးကျေးရွာအနီး အမှတ်(၄) တည်ဆောက်ရေးက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရွှေကျင်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိသည်။
ထို့နောက် စီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်၌ ၀န်ကြီးအား တည်ဆောက်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပင်မတမံ၏ အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းရှိ ကျောက်စီလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ တမံအတွင်း ရေသိုလှောင်ထားရှိမှုနှင့် ရေလွှဲရေထုတ်ပြွန် Concrete Plugလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ပင်မရေပိုလွှဲလုပ်ငန်း၏ Access Bridge တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု၊Gantry Crane Beam လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ရေခေါ်မြောင်း ၀ဲ/ယာ Slope Protection လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု၊ စက်ရုံအတွင်း Unit 1,2,3,4တို့တွင် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ စက်မှုလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ Tailrace channel ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ဆွစ်ယာဒ်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်ဆွစ်ယာဒ် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမော်သာထွေးက ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ တင်ပြချက်များအပေါ် ၀န်ကြီးက လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပြီး စီမံကိန်းရှိလုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ကြရေးနှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ပြီးစီးအောင် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ္စည်းများ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ သုံးစွဲကြရေးနှင့် စက်အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ရာတွင်လည်း စနစ်တကျနှင့် အချိန်မီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ကြရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့ကို မှာကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ၀န်ကြီးသည် ပင်မရေပိုလွှဲလုပ်ငန်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ Gantry Crane Beamများ တပ်ဆင်ပြီးစီးမှု၊ ပင်မတမံပေါ်မှ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ဖြတ်သန်း၍ ပင်မတမံ အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းရှိ ကျောက်စီလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ တမံဝဲဘက်ကမ်းရှိ EL-215mရှုရပ်မှနေ၍ တမံအတွင်း ရေ၀င်ရောက်နေမှုနှင့် ဆွစ်ယာဒ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ယင်းနောက် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်၌ စက်ရုံအတွင်း Unit 1,2,3,4တို့တွင် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ စက်မှုလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းများ အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် Decoration Workများ ဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ရှိသူများအား မှာကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Comments Off on ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်း ရွှေကျင်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| ရွှေကျင် (Shwe Gyin)	| Permalink
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် ရွှေကျင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိ
(နေပြည်တော် မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်)
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်သည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုနှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဇော်၊ ပဲခူးတိုင်း အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်လှမင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ လိုက်ပါလျက် မတ် ၂၈ရက် နံနက် ၉နာရီ ၄၅မိနစ်တွင် ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် နေပြည်တော်မှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမြို့နယ်ရှိ သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း သို့ ရောက်ရှိသည်။
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ပဲခူးတိုင်းအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ဆန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရွှေစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုကြသည်။
ထို့နောက် စီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်၌ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ တည်နေရာ၊ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှစီးဝင်ရေ၊ ကန်ရေပြည့် ရေလှောင်ပမာဏ၊ တမံအမျိုးအစား၊ တပ်ဆင်စက်အင်အားနှင့် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မည့် ဓာတ်အားပမာဏတို့ကိုလည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် ရွှေစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ လီမိတက်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းမြင့်နိုင်ကရေအား အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်နေမှု၊ ပင်မတမံ၊ ကုန်းကြောတမံ၊ ရေပိုလွှဲ၊ ရေလွှဲဥမင်လိုဏ်၊ ချဉ်းကပ်ဥမင်လိုဏ်နှင့် ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ပြီးစီးမှုအခြေအနေ၊ စက်ယန္တရားများ ရောက်ရှိမှုနှင့် ၀န်ထမ်းအင်အားစသည့် အချက်အလက်များကိုလည်းကောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြကြသည်။
တင်ပြချက်များအပေါ် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကလိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဖြည့်ဆည်းစီမံ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ထို့နောက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ပညာရှင်များအား သစ်သီးခြင်း လက်ဆောင်ပေးအပ်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုကို ရှုရပ်မှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမြို့၏အရှေ့ဘက် ၁၄မိုင်ခန့်အကွာရှိ သောက်ရေခပ်ချောင်းပေါ်၌ တည်ရှိသည်။ တမံအမျိုးအစားမှာ CFRD (Concrete Faced Rock Fill Dam) အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး တမံအလျား ၁၂၅၃ပေနှင့် တမံအမြင့် ၃၀၈ပေရှိသည်။ တပ်ဆင်စက်အင်အားမှာ ၁၂၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှလျှပ်စစ် ဓာတ်အား ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း ၆၀၄သန်း ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုမှတစ်ဆင့် ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ဆက်လက် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ပဲခူးတိုင်း ရွှေကျင်မြို့နယ်ရှိ ရွှေကျင်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိကြရာ ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ဇော်၊ နယ်မြေခံ တပ်နယ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးဝင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သည် ရှင်းလင်းဆောင်ရှုရပ်ရှိ စီမံကိန်းပုံစံငယ်ကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး ရေလှောင်တမံနှင့် စီမံကိန်းအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
ယင်းနောက် ရှင်းလင်းဆောင်၌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အား ၀န်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ တည်နေရာနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဦးစွာရှင်းလင်း တင်ပြပြီး အကူရေပိုလွှဲနှင့် ကုန်းကြောတမံတည်ဆောက်ပြီးစီးမှုနှင့် ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် တည်ဆောက်နေမှုအခြေအနေတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
Comments Off on နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် ရွှေကျင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိ	| ရွှေကျင် (Shwe Gyin), သောက်ရေခပ်(၂) (Thoutyaykhat-2)	| Permalink
Shwegyin Dam Project inspected
(NAY PYI TAW, 21 March, 2010)
Minister for Electric Power No. (1) Col Zaw Min paidavisit to Shwegyin Dam Project yesterday.
The project is being implemented by No. (4) Construction, near Kyauknagar village about six miles northeast Shwegyin in Bago Division.
At the briefing of the project, Construction Director U Hein Htet reported the minister on progress in construction and Deputy Director- General U Maw Tha Htwe submitted the supplementary report.
The minister called for completing the project on schedule, using quality materials and minimizing wastage.
He later viewed the construction tasks and attended to the needs. The minister met staff of the project and gave necessary instructions.
Comments Off on Shwegyin Dam Project inspected	| ရွှေကျင် (Shwe Gyin)	| Permalink
Minister inspects Shwegyin dam project
(NAY PYI TAW,3Nov, 2009)
Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min went on an inspection tour of Shwegyin dam project near Kyauknaga village,6miles of Northeast of Shewgyin, Bago Division, being built by No4Construction Group yesterday morning. On arrival at the dam project, the minister viewed progress in building the dam from the observation deck.
Next, the project director presented reports to the minister on progress in building the dam, future tasks and stockpile of materials while the deputy director-general gaveasupplementary report.
After hearing the reports, the minister attended to the needs and then gave instructions on timely completion of the construction tasks.Next, the minister inspected Ogee & Bidge work, Chute Protion work and Stilling Basin work and earth work for the dam with the use of heavy machinery, installation of gate doors of water intake structure, water diverted from the river and progress in filling the dam with earth and gravel.
Comments Off on Minister inspects Shwegyin dam project	| ရွှေကျင် (Shwe Gyin)	| Permalink
အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း ရွှေကျင်ရေလှောင်တမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများစစ်ဆေး
(နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၃၊၂၀၀၉ )
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းသည် နိုဝင်ဘာ ၂ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်း ရွှေကျင်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ခြောက်မိုင်ခန့်အကွာ ကျောက်နဂါး ကျေးရွာအနီး၌ အမှတ်(၄)တည်ဆောက်ရေးက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော ရွှေကျင်ရေလှောင်တမံ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်သို့ ရောက်ရှိပြီးရှုရပ်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နေမှုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ထို့နောက် စီမံကိန်းညွှန်ကြားရေးမှူးက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက် နေမှုများ၊ အဓိကပံ့ပိုး ပစ္စည်းများရရှိမှုနှင့် ပြည်ပမှပစ္စည်းများရောက်ရှိမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဖြည့်စွက် ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ၀န်ကြီးကလိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေး၍ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း အချိန်မီပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ရေး မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် ၀န်ကြီးသည် Ogee & Bidge လုပ်ငန်းပိုင်း၊ Chute Protion လုပ်ငန်းပိုင်းနှင့် Stilling Basin လုပ်ငန်းပိုင်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ ပင်မတမံ မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းများကို စက်ယန္တရားကြီးများဖြင့် ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ရေယူအဆောက်အအုံ Gate တံခါးများ တပ်ဆင်နေမှု၊ မြစ်ရေလွှဲထားမှုနှင့်တမံမြေကြီး ကျောက်သားဖို့ခြင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု အခြေအနေတို့ကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Comments Off on အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း ရွှေကျင်ရေလှောင်တမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများစစ်ဆေး	| ရွှေကျင် (Shwe Gyin)	| Permalink
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း ဖြူးချောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် ရွှေကျင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ စစ်ဆေး
(နေပြည်တော် မတ် ၂၁၊ ၂၀၀၉)
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝင်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်ကိုကို၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီး များ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦး၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စည်ပင် သာယာရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းညွန့်၊ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ် စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်း၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဘုန်းဆွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမြဦး၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရုံးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ လိုက်ပါလျက် မတ် ၁၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်မှ ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ထွက်ခွာလာရာ ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့၏ အနောက်ဘက် ခုနှစ်မိုင်ခန့်အကွာ ဖြူးချောင်းပေါ်၌ တည်ဆောက် အကောင် အထည်ဖော် လျက်ရှိသည့် ဖြူးချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ပဲခူးတိုင်း အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ၊ တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်လှမင်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုကြသည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား စီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်၌ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းက ဖြူးချောင်း ရေလှောင်တမံ၌ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းထည့်သွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄၀ ထုတ်လုပ်နိုင်အားရှိပြီး ထွက်ရှိ ဓာတ်အားများကို ဓာတ်အား ကွန်ရက်စနစ်မှတစ်ဆင့် တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ဖြူးပေးရန် တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း၊ စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်း ရေအားအရင်းအမြစ်များမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲမည့် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၁၂ ခုရှိပါကြောင်း၊ တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သော ပေါင်းလောင်း၊ ခပေါင်း၊ ရဲနွယ်၊ ဇောင်းတူရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ အခြေအနေ၊ တည်ဆောက်ဆဲ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများဖြစ်သည့် ဖြူးချောင်း၊ ကွန်းချောင်း၊ အထက်ပေါင်းလောင်း၊ နန်ချို၊ သောက်ရေခပ်(၂)၊ ရွှေကျင်စီမံကိန်းများနှင့် တည်ဆောက်ရန် လျာထားသည့် သောက်ရေခပ်(၁)နှင့် ဘောဂတရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ ရှိပါကြောင်း။ ဆက်လက်၍ ၀န်ကြီးက စီမံကိန်း၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ရေယူအဆောက်အအုံလုပ်ငန်း၊ ရေထိန်းတံခါးပြွန်လုပ်ငန်း၊ ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်လုပ်ငန်း၊ ဖိအားမြင့် သံမဏိပိုက်လိုင်းလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ လုပ်ငန်း၊ ဆွစ်ယာဒ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စက်ရုံရေထုတ်မြောင်း လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချိန်အမီ ပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်နေမှု၊ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး အနေဖြင့် ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးမှုတို့ကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းက လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာနက တာဝန်ယူတည်ဆောက်သော ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းပိုင်းတို့မှာ ချိန်ကိုက်ပြီးစီးရန် အရေးကြီး ကြောင်း၊ စီမံကိန်းများ စောပြီးစီးပါက ပြည်သူများအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှု မြန်မြန်ရရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းကြီးသည် ဘက်စုံစီမံကိန်းကြီးဖြစ်၍ အစစ သတထားလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုကြောင်းဖြင့် မှာကြားသည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖြူးချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်းဆောင်အနီးရှိ ရှုရပ်မှ ကြည့်ရှုကြသည်။
ထိုမှတစ်ဆင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းသည် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်လှမင်းလိုက်ပါလျက် ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြရာ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် ပဲခူးခရိုင် ရွှေကျင်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ခြောက်မိုင်ခန့်အကွာ ကျောက်နဂါးရွာအနီးရှိ ရွှေကျင် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိသည်။
ရှေးဦးစွာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းအား အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း က ရွှေကျင် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တည်နေရာ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြရာတွင် ရွှေကျင် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၇၅ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်အားရှိသော ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရွှေကျင်ချောင်းပေါ်၌ ရေလှောင်တမံ အလျားပေ ၃၆၁၀ ၊ အမြင့် ၁၈၅ ပေရှိ ဇုန်အမျိုးအစားတမံ တည်ဆောက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အကူရေပိုလွှဲနှင့် ကုန်းကြောတမံတို့မှာ ရာနှုန်းပြည့် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရေလွှဲ ရေထုတ်ပြွန်၊ ပင်မတမံ၊ ပင်မရေပိုလွှဲ၊ ရေယူအဆောက်အအုံ၊ ဖိအားမြင့် သံမဏိပိုက်လိုင်းနှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတို့ကို ဆက်လက် တည်ဆောက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းတစ်လုံးအနေဖြင့် ၇၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန်၊ စီမံကိန်းကြီးပြီးစီးရန် စီမံဆောင်ရွက်နေမှုများကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
တင်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းက စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်း စီမံကိန်းများ၌ ဤစီမံကိန်းသည် အရေးပါသော နိုင်ငံတော်၏ အကြီးစား စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းကို လျာထားသတ်မှတ် ထားသည့်ကာလအတွင်း စနစ်တကျ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြီးစီးအောင် ဂရုပြု ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထွက်ရှိလာမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို သုံးစွဲသူများထံ အရောက်ပေးပို့မည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးအပိုင်းကိုလည်း ချိန်ကိုက် ပြီးစီးအောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်းဖြင့် မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရွှေကျင်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဆောင်ရှုရပ်မှ ကြည့်ရှုကြသည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းသည် ရွှေကျင်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ပုံစံငယ်ကို ကြည့်ရှုရာ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းပိုင်းအလိုက် အဆောက်အအုံတည်ရှိမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
Comments Off on ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း ဖြူးချောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် ရွှေကျင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ စစ်ဆေး	| ရွှေကျင် (Shwe Gyin), ဖြူးချောင်း (Phyu Chaung)	| Permalink
General Thura Shwe Mann inspects Pyuchaung Hydropower Project, Shwegyin Hydropower Project
(NAY PYI TAW, 21 March, 2009)
Member of the State Peace and Development Council General Thura Shwe Mann of the Ministry of Defence, accompanied by Maj-Gen Ko Ko and Lt-Gen Khin Zaw of the Ministry of Defence, senior military officers, Minister for Agriculture and Irrigation Maj-Gen Htay Oo, Minister for Progress of Border Areas and National Races and Development Affairs Col Thein Nyunt, Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min, Minister for Education Dr Chan Nyein, Minister for Information Brig-Gen Kyaw Hsan, Deputy Minister for Home Affairs Brig-Gen Phone Swe, Deputy Minister for Health Dr Mya Oo and officials of the SPDC Office, left Nay Pyi Taw by helicopter at9a.m on 19 March and arrived at Pyuchaung Hydro-power Project site on Pyu Creek,7miles west of Pyu.
The General and party were welcomed by Chairman of Bago Division PDC Commander of Southern Command Brig-Gen Hla Min and officials.
At the briefing hall, the Minister for Agriculture and Irrigation reported on the location of Pyuchaung Multi-purpose Dam Project and facts about the project. He reported that Pyuchaung Multi-purpose Dam Project is being implemented to irrigate 100,000 acres of farmlands, to prevent the flooding of farmlands and to generate 40-megawatt hydropower. He said that efforts are being made for timely completion of the preliminary construction works, building of the water diversion tunnel and the spillway. The project has completed by 30 per cent, he added.
The minister also reported on timely completion of the structures of the project and 52 per cent completion of the project.
After hearing the reports, General Thura Shwe Mann delivered an address. He said that it is important to complete the construction of dams in time by the Ministry of Agriculture and Irrigation and the hydropower work by the Ministry of Electric Power No. 1. He said that the earlier completion of projects will benefit the local people sooner. The General urged the officials to implement the multi-purpose project with awareness.
Next, the General and party viewed progress of Pyuchaung Hydropower Project from the view point. Next, they looked into tasks of the project inamotorcade.
They proceeded to Pyu through the road linking Yangon-Mandalay Expressway and Pyu.
At Pyu People’s Hospital (50-bed), the General and party cordially conversed with the eye patients from Kanyutkyin, Nyaung-bintha, Okphyat, Zeyawady, Pyu, Shwe-gyin, Kyaukdata, Toungoo, Ottwin, Pado and Penwegon.
At the hospital, the General and party viewed eye tests, eye power examination and medical treatment being provided by Head of Department Professor Dr Tin Win of Yangon University of Medicine-1 and party, for the patients who had received eye surgical operations.
Next, the General and party visited the operation theatre where the eye patients were undergoing eye surgery.
The eye surgery was performed from 19 March to date. On 19 March, eye test was conducted on over 300 patients;atotal of 90 patients were registered to undergo surgery; and eyeglasses were provided to 35 patients.
Accompanied by Commander Brig-Gen Hla Min, the General and party proceeded to Shwegyin Hydropower Project near Kyauknaga Village,6miles northeast of Shwegyin.
Minister Col Zaw Min reported on the location and facts about the project. He reported that the project is being implemented to generate 75 megawatts. He continued to say that the 3,610 feet long and 185 feet highzone type embankment is being built on Shwegyin Creek. The reserve spillway and the ground embankment have been completed cent per cent, he said. The diversion conduit, the main dam, the main spillway, the water intake structure, the pen stock and the power plant are under construction, he added. The minister said that the whole project has completed 77.5 per cent. He reported in detail on arrangements being made for timely completion of the project.
After hearing the reports, the General gave instruction, saying that Shwegyin Hydropower Project among Sittoung Basin projects is one of the important major projects of the nation. He pointed out that it is necessary to pay attention to completion of the project as scheduled. The General called for timely completion of the tasks to supply electricity from the power plant to the consumers.
Next, the General and party looked into progress of the project from the view point. They viewed the scale model of the project site. Minister Col Zaw Min briefed the General on location of the buildings for generating of electricity.
Comments Off on General Thura Shwe Mann inspects Pyuchaung Hydropower Project, Shwegyin Hydropower Project	| ရွှေကျင် (Shwe Gyin), ဖြူးချောင်း (Phyu Chaung)	| Permalink
You are currently browsing the archives for the ရွှေကျင် (Shwe Gyin) category.
Pathi Hydropower Plant in Toungoo Tsp inaugurated to hail